Duulimaadyada British Airways ee London Heathrow ilaa Saint Lucia waxay soo laabteen in ka badan 30 sano
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada British Airways ee London Heathrow ilaa Saint Lucia waxay soo laabteen in ka badan 30 sano
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Duulimaadyada British Airways ee ka baxa London Heathrow waxay ku laabanayaan Saint Lucia ka dib in ka badan 30 sano
UK sida caadiga ah waa suuqa dalxiiska labaad ee ugu weyn Saint Lucia.
TUI waxay bixisaa adeeg toddobaadle ah Saint Lucia oo ka timaadda Gatwick ee London.
British Airways waxay toddobaadkiiba leedahay afar duullimaad oo ka timaadda Gatwick -ka London kuna sii jeedda Saint Lucia.
Adeegga British Airways ee Heathrow wuxuu dhammaan doonaa Sebtember 4, 2021.
Saint Lucia waxay ku dartay albaab kale oo loo socdo iyadoo dib -u -soo -saarid adeeg leh British Airways ka baxsan London Heathrow (LHR) in ka badan 30 sano. Diyaaradda Boeing 777 ayaa soo degtay Sabtidii, Luulyo 24, 2021, abaare 5:45 pm galabnimo iyadoo wadarta guud ay ahayd 173, kuwaas oo badankoodu ahaa booqdeyaal.
Marka laga baxo Gatwick (LGW), Saint Lucia waxay mar hore soo dhaweynaysaa adeeg toddobaadle ah oo leh TUI iyo 4 duulimaad toddobaadkiiba British Airways. Boqortooyada Midowday (UK) sida caadiga ah waa suuqa dalxiiska labaad ee ugu weyn Saint Lucia ilaa iyo hadda, sannad-ka-taariikhda waxay ka tarjumaysaa koboca 4%.
13 shaqaale ah oo uu hoggaaminayo Kabtan -Peter Williams ayaa ku biiray Saraakiisha Hay'adda Dalxiiska Saint Lucia (SLTA) si ay u helaan huurada xusuusta oo muujinaysa cajaladaha mataanaha ah, suuqyada niche, iyo baakadaha soo dhaweynta layaabka leh. Laba rakaab oo nasiib leh ayaa iyagana hibo loo siiyay markay yimaadeen.
“Adeeggan toddobaadlaha ah ee dhowaan la soo bandhigay oo ka Heathrow waxay timaadaa waqti ku habboon marka Saint Lucia ay durbaanka u garaaceyso taageero dheeraad ah xagaagii hore oo xiisaha lahaa, iyo xilliga jiilaalka ee ugu sarreeya. Tani waxay sidoo kale calaamad u tahay horumarka sii socda ee dib-u-soo-kabashada buuxda ee waaxda dalxiiska, ”ayuu yiri Maareeyaha Xiriirka Dadweynaha- Geraine Georges.
Adeegga British Airways ee Heathrow wuxuu dhammaan doonaa 4 -ta Sebtember, 2021, wada -hadallada ayaa durba socda si dib loogu bilaabo mustaqbalka dhow. Diyaaradda ayaa sidoo kale loo qorsheeyay inay kordhiso duulimaadyada inta lagu jiro jiilaalka iyadoo duulimaadyo maalinle ah laga bilaabo Noofembar ka baxsan Gatwick (LGW).